Hogganaan tajaajila tikaa Sudaan duraanii Saalaah Gosh Ameerika akka hin galle dhorkaman – Fana Broadcasting Corporate
Hogganaan tajaajila tikaa Sudaan duraanii Saalaah Gosh Ameerika akka hin galle dhorkaman
Finfinnee, Hagayya 9,2011 (FBC) -Hogganaan tajaajila tikaa Sudaan duraanii Saalaah Gosh sababii himannaa mirga namoomaa sarbuu irratti dhiyaateef jecha akka Ameerikaa hin gallee dhorkaman.
Ibsa Haajaan biyyoota alaa Motummaa US baasee ,Saalaah Gosh tibba itti gaafatamaa Tajaajilawwan Nageenyaa fi Tika Biyyaaleessaa (NISS) Sudaan turaniitti darara mirga namoomaa keessatti hirmaachusaaniif ragaa qabatamaa qabna jedha.
Barreessaan Haajaa Alaa Ameerikaa, Maayik Pompe’o Ergaa karaa tiwiitaraan barreessaniin motummaa ce’uumsaa Sudaan siviiliin hogganamuu deeggarsa isaanii ibsaniiru.
Ergaa barreessaniinis, har’a Salaah Gosh fi miseensoota maatii isaa haaluma seera kutaa 7031 (c) tti sababii hirmannaa inni Sudaan keessatti mirgoota namoomaa sarbuu, keessatti taasiseef ifattan morma jedhan.
Isaanis US galuu hin danda’an. Kanneen mirga namoomaa sarban hunda itti gaafatamtoota taasisuu itti fufna jedhaniiru.
Laaybeeriyaatti balaa ibiddaa qaqqabeen lubbuun namoota 28 darbe
Gibts haariroo Sudaan waliin qabdu akka cimu ni barbaaddi- Preezidaant Al Siisi